प्रबिधि Archives - VOICE OF NEPAL
-एजेन्सी तपाईं फेसबुकमा कुनै फोटा वा स्टाटस राख्नुहुन्छ। केही छिनपछि कति 'लाइक' वा 'रियाक्सन' आएछन् भनेर हेर्न थाल्नुहुन्छ। धेरै संख्या देखे दंग पर्नुहुन्छ। थोरै भए निराश। तपाईं पनि यसमा पर्नुहुन्छ भने अब यी सबै झन्झटबाट चाँडै मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। फेसबुकले लाइक र रियाक्सनको संख्या नदेखाउने तयारी गरेको...
एजेन्सी । फेसबुक प्रयाेगकर्ताका डाटा असुरक्षित हुन थालेपछि फेसबुकले हजाराैँ एपहरु निलम्बित गरेकाे छ । प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित डेटा चोरी हुनेगरी भएको केम्ब्रिज एनालिटिका काण्डपछि फेसबुकले दशौँ हजार एपलाई निलम्बन गरेको बताएको हाे । झन्डै चार सय विकासकर्तासँग सम्बद्ध ती दशाैँ हजार एपहरुका कारण सुरक्षा जाेखिम बढे...
एजेन्सी । तपाईको यति महत्वपूर्ण फोन कसैले ह्याक गर्यो भने ? तपाई झट्टै यसको समाधानका लागि लागिपर्नुहुन्छ । तर यदि तपाईको फोन ह्याक पनि भयो र तपाईलाई थाहा पनि भएन भने ? यहाँ तपाईको फोन ह्याक भएनभएको थाहा पाउने यस्ता ७ तरिकाहरु रहेका छन्, जसमाः फोन स्पीडः यदि तपाईको फोन सामान्य भन्दा सामान्य रुपमा...
एजेन्सी अहिले हाम्रो हातमा कुनै न कुनै कम्पनीको स्मार्टफोन पक्कै छ । स्मार्टफोन अहिले हाम्रो अत्यावश्यक जस्तो भइसकेको छ । कुनैपनि बेला छुटाउन नचाहाने स्मार्टफोनको चार्जरमा वा चार्जिङ केबलमा समस्या भएको पनि बारम्बार सुन्नमा आउँछ । चार्जर केबल बिग्रिनुका धेरै कारण छन् । युएसबी केबल काटियो भने, तानियो भ...
एजेन्सी -भिडियो शेयरिङ एप ‘टिकटक’को अपार सफलतापछि यसलाई बनाउने कम्पनीले चाँडै नै विश्‍व बजारमा स्मार्टफोन ल्‍याउने भएको छ। पछिल्लोसमय सबैभन्दा धेरैले प्रयोग गरिरहेको सामाजिक सञ्‍जाल मिडिया एप हो। यसको करीब ५० करोड प्रयोगकर्ता रहेका छन्। टिकटकमा १५ सेकेण्डको भिडियो पोस्ट गर्ने गरिन्छ।...
फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्टाग्राम आदी लगायत एपहरुमा उक्त फेसएप बाट बनाईएका बुढेसकालका फोटाहरु हाल्ने क्रम बिश्वब्यापी रहेको छ। फेसएप अहिले आईओएस र एण्डरोईडमा सबैभन्दा बढी डाउनलोड भैरहेको एप हो। सन् २०१७मा रुसमा निर्मित उक्त एप अहिले भाईरल भैरहेको छ। उक्त एपले प्रयोगकर्ताहरुको सबै सुचना लिने र त्यस्लाई जहिले जुनसिकै ब...
आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३, आइप्याडका लागि आइप्याड ओएस ( iPadOS ) र म्याक बुकका लागि म्याक वोएस ( macOS ) को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ । iOS १३ आइफोन सिक्स एस ( iPhone 6s ) वा सोभन्दा नयाँ आइफोनहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । आइफोन ६ वा सोभन्दा पुरानो आइफोनहरूले यस नयाँ iOS को संस्करण इन्स्टल गर्न प...
- एजेन्सी हामीले नयाँ ल्यापटप किन्नुपर्ने अवस्थामा ल्यापटपबारे सबै कुरामा हाम्रो ध्यान नपुग्न पनि सक्छ । जसले गर्दा ल्यापटप किनिसकेपछि पछुताउनुको अलावा अरू कुनै विकल्प रहँदैन । त्यसैले, तपाईंले ल्यापटप किन्दा यी टिप्स अपनाउनुभयो भने तपाईंको काम सहज हुनुका साथै ल्यापटपको आयु पनि लामो हुन्छ: १. अपरेटिङ सिस्टम...
आफ्ना डिजिटल अकाउन्टको पासवर्ड व्यवस्थापन अहिले सबैभन्दा जटिल विषय हो । व्यक्तिका विभिन्न खाले अनलाइन अकाउन्ट हुन्छन् र यस्ता अकाउन्टको पासवर्ड चयनमा धेरैले सजिलो बाटो रोज्दछन् । आफ्नो पासवर्ड आफैले भुल्ने डरले धेरै मानिसले सजिलो खालको पासवर्ड राख्दछन् । जसका कारण जो कोहीले पनि सजिलै पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्दछन् । अझ...
काठमाडौँ । विश्वमा निर्जिव वस्तुसँग पनि मानिस विवाह गर्ने गर्दछन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, चीनका इन्जिनियरले एउटा रोबोटसँग विवाह गरेर यस्तै आश्चर्य लाग्ने काम गरेका छन् । केटी खोज्दा खोज्दा नपाएर हत्तु बनेका एक चिनियाँ इन्जिनियरले अन्ततः आफैंले बनाएको रोबोटसँग विवाह गरेका छन् । ३१ वर्षीय इञ्जिनियर झेङ जिय...